Fedora 20 Heisenbug ကိုထည့်သွင်းပြီးသောအခါဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Fedora 20 Heisenbug ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Fedora 20 Heisenbug သည်လွန်ခဲ့သောအပတ်များစွာကထိုမြင်ကွင်းကိုရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့၏မွမ်းမံမှုအသစ်ကိုကြည့်ရှုရန်ဘယ်တော့မျှမနာကျင်ပါ Fedora post installation လမ်းညွှန်အထူးသဖြင့် Linux ပေါ်မှာစတင်အလုပ်လုပ်နေသူတွေ။ အဲဒါကိုအသုံးဝင်မယ်လို့သင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
1 ၁။ Fedora ကို Update လုပ်ပါ
2 ၂။ Fedora ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ထားပါ
3 3. အပို repositories ကို Install လုပ်ပါ
4 4. yum တိုးတက်စေ
5 ၅။ Nvidia driver ထည့်သွင်းပါ
6 ၆။ Gnome Shell ကိုပြုပြင်ပါ
7 ၇။ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကုဒ်များတပ်ဆင်ပါ
8 ၈။ ဒီဗီဒီများကိုကြည့်ရှုရန်ကုဒ်နံပါတ်များကိုတပ်ဆင်ပါ
9 ၉။ Flash ကို Install လုပ်ပါ
10 ၁၀။ java + java plugin ကိုသွင်းပါ
11 ၁၁။ zip, rar စသည်တို့ကို install လုပ်ပါ။
12 ၁၂။ LibreOffice ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် install လုပ်ပါ
13 13. ဝိုင်ထည့်သွင်းပါ
14 Yapa: အလိုအလျောက်တပ်ဆင်သူများ
၁။ Fedora ကို Update လုပ်ပါ
root privilege ပေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုက system ကို update လုပ်ဖို့ပါ။ မည်သည့်အမှားများကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်နှင့်လတ်တလော packages များဖြင့်အရာအားလုံးကို install လုပ်နိုင်ရန်၎င်းသည် ၁၀၀% အကြံပြုသည်။
yum -y update ကို
၂။ Fedora ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ထားပါ
ဤဗားရှင်းအသစ်၏အားသာချက်များမှာ Anaconda installer နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အများစုတို့သည်စပိန်ဘာသာစကားနှင့်ပံ့ပိုးမှုရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ system တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားဖြင့်ဖြစ်စေလိုပါက Activities> Applications> System Settings> Region သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာစကားနှင့်စပိန်ဘာသာကိုရွေးပါ။
3. အပို repositories ကို Install လုပ်ပါ
RPM Fusion သည် Fedora တွင်နောက်ထပ်အရေးကြီးသော (နှင့်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်မဖြစ်မနေ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Red Hat သည်လိုင်စင်သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ၄ င်း၏ဖြန့်ဖြူးရာတွင်မပါ ၀ င်သောအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအများစုပါဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤသိုလှောင်ရာနေရာသည်ဥပမာအားဖြင့် multimedia playback codecs ကိုတပ်ဆင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Fedora ကကျွန်တော်တို့ကိုစီးပွားဖြစ်ကုဒ်နဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုံးဝလွတ်လပ်ပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေလို့ရအောင်အခမဲ့နည်းလမ်းတွေပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားလို့ပါ။
su -c yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion- nonfree-release-stable.noarch.rpm '
ပြီးဆုံးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ repositories ကို update လုပ်ရမည်။
sudo yum စစ်ဆေး - update ကို
update ကို yum sudo
4. yum တိုးတက်စေ
yum သည် Ubuntu ၏ apt-get နှင့်တူသည်။ package အနည်းငယ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်သွားမည်။
yum -y ထည့်သွင်း yum-plugin-fastestmirror yum -y install yum-presto yum -y ထည့်သွင်း yum-plugin-install install yum-langpacks
၅။ Nvidia driver ထည့်သွင်းပါ
ပထမအချက်အနေဖြင့် RPM Fusion repository ကိုအခမဲ့နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သောအခက်များနှင့်အတူဖွင့်ပါ (အဆင့် ၃ ကိုကြည့်ပါ) ။
rpm -qa * \_ nvidia \_ * * \_ kernel ကို \_ * | မျိုး; uname -r; lsmod | grep -e nvidia -e nouveau; ကြောင် /etc/X11/xorg.conf lspci | grep VGA
2.- သင်၏ Nvidia ဗီဒီယိုကဒ်သည်ဒရိုင်ဘာများနှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိအောက်ပါ link သို့သွားပါ။
3.- Kernel နှင့် SELinux module ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။
4.- သင်၏ဗွီဒီယိုကဒ်နှင့်အညီတပ်ဆင်ပါ -
အဆင့် ၅: nouveau ကို initramfs မှဖယ်ရှားသည်
5.- ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ။
၆။ Gnome Shell ကိုပြုပြင်ပါ
Gnome3Shell လာတော့ Fedora မှာဒါကိုသင်လုပ်ချင်တယ်။ ဒါကို configure လုပ်ဖို့၊ tema၊ fonts စသဖြင့်ပြုပြင်ရန် gnome-tweak-tool ကို install ခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ Dconf-editor သည်သင့်အား Fedora ကိုထပ်မံပြုပြင်ရန်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
yum သည် gnome-tweak-tool ကိုထည့်သွင်းပါ။ yum ကို install dconf-editor
yum -y ကို install လုပ် gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-bad-nonfree gstreamer-plugins-ugly gstreamer-ffmpeg
rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release.rpm yum အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ yum libdvdread ကို install libdvdnav lsdvd libdvdcss
၉။ Flash ကို Install လုပ်ပါ
32/64 bit Flash:
yum ကို Install လုပ်ပါ။ alsa-plugins-pulseaudio flash-plugin ကို install လုပ်ပါ
၁၀။ java + java plugin ကိုသွင်းပါ
yum -y ကို install လုပ်ရန် java-1.7.0-openjdk yum -y ထည့်သွင်းရန် java-1.7.0-openjdk-plugin
သို့သော်သင်သည် Java developer တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် Sun Java ၏တရားဝင်ဗားရှင်းကိုသင်တပ်ဆင်လိုပေမည်။
အကယ်၍ icedtea plugin ကိုထည့်သွင်းထားပါက၎င်းကို uninstall သို့မဟုတ် disable ဖြစ်ရပါမည်။
၁၁။ zip, rar စသည်တို့ကို install လုပ်ပါ။
yum -y unrar p7zip p7zip-plugins ထည့်သွင်းပါ
၁၂။ LibreOffice ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် install လုပ်ပါ
yum -y ကိုထည့်သွင်းပါ libreoffice-base libreoffice-calc libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-impress libreoffice-langpack-en libreoffice- သင်္ချာ libreoffice-စာရေးသူ hunspell hunspell-en
yum ဝိုင်ထည့်သွင်း yum -y cabextract install လုပ်ပါ
သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Winetricks ကို install လုပ်ပါ (အချို့သော Windows ပရိုဂရမ်များအတွက်လိုအပ်သော DLL များအစုတစ်ခု) ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ usr / bin / winetricks ကိုဤကဲ့သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်
Fedora ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းအများစုကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အတွက် scripts အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူတို့တွင်ဖော်ပြသင့်သည် ရက်စက်မှု y Fedora အသုံးအဆောင်များ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » Fedora 20 Heisenbug ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
အရမ်းကောင်းတဲ့လမ်းညွှန် .. ဒါပေမယ့်ငါ့ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ hahaha ကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်အရာတွေကိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်း။
ဟားဟား! ဟုတ်တယ် ...
ဗိုက်ကင်းကိုငါ post လုပ်တယ်၊ ကျန်တာက arch wave လား netinstall debian install
ဤအရာအလုံးစုံကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ငါပြောနိုင်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်: "ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် Linux Mint ကိုဤအရာအလုံးစုံတို့နှင့်အတူပြီးသားလာ
ထိုအခါငါစီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်မရခဲ့ပါဘူး။ ငါထင်တာကဖြန့်ဖြူးတာကပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်၊
Fedora သည် Open Source နှင့်သဘောတူရန် (သို့) သဘောမတူရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုinရိယာတွင်မရှိသောပရိုဂရမ်များကိုသင်လိုချင်ပါကသင်ကစားသည်။ စကားမစပ်၊ Oracle Java plugin သည် Linux Mint တွင်ပါလာသလား။ တိကျသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ လွဲ၍ တရားဝင်သည် OpenJDK ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စံပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိလျှင်အမှားများစတင်လာပါက Vydeo, Skype, Nero, Adobe Air, Opera စသည့်ပိတ်ထားသောပရိုဂရမ်များစွာကိုတပ်ဆင်ရလိမ့်မည်။
ထပ်မံ၍ အခြားအချက်တစ်ခုမှာစပိန်ဘာသာကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်စနစ်ထည့်သွင်းပြီးသို့မဟုတ် linbreoffice-write, libreoffice-calc, libreoffice-draw နှင့် libreoffice-impress နှင့်အတူပါလာသည်နှင့်၎င်းတွင်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စနစ်။
Fedora ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကတော့အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကိုသာသုံးတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်စီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာတွေဟာလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကြိုက်အနေအထားနဲ့ပါ။ ကျွန်မရဲ့ဂရပ်ဖစ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်စားပွဲဒရိုင်ဘာကိုသုံးပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ haha ​​ကိုချိုးဖောက်ဖို့စိတ်ထဲဘာကြောင့် xD လို့ငါ့ကိုဘာကြောင့်လာတာလဲမသိဘူး
အကြံပြုချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည် command တစ်ခုထက်ပိုပြီးထားသည့်နေရာကို«; »နှင့်ထည့်ပါ။ ဒါ:
yum စပျစ်ရည်ကို install လုပ်ပါ
yum -y cabextract ထည့်သွင်း
yum စပျစ်ရည်ကို install; yum -y cabextract ထည့်သွင်း
၎င်းသည်အားလုံးသည်တူညီသောဖိုင်တွင်ရှိသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည် (သင်သိပြီးသားဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ မဖတ်သူတစ် ဦး ဦး ရှိလျှင်ယင်းကိုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်)
လူတွေကငါ့ကို Fedora ကိုအပြစ်မတင်ကြဘူး။ ဒီ script အားလုံးကိုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများလည်းရှိပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့် -
[ကုဒ်] su -c «ဆံပင်ကောက်ကောက် http://satya164.github.io/fedy/fedy-installer -o fedy-installer && chmod + x fedy-installer && ./fedy-installer de [/ code]
ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ကျရှုံးလဲ၊ အဲဒါကိုဘာလို့ WordPress လို့ထင်ရတာလဲမသိဘူး။
သူတို့ဟာ Slackware ကိုမစမ်းကြည့်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ် ငါခဏသုံးပြီးငါကြိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်အဆင်သင့်ရရန်အချိန်တစ်ငရဲ။
AMD ဂရပ်ဖစ် = nvidia သို့ပြောင်းပါ၊ သို့တည်းမဟုတ် Intel ၏ပေါင်းစည်းထားသောဂရပ်ဖစ်များကိုသုံးပါ
haha ... Fedora တွင်စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများတပ်ဆင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ မလွယ်ကူပါ။
Flash plugin ကိုအောင်အောင်မြင်မြင် install လုပ်နိုင်ရန်အတွက် Adobe repository အခန်းတွင်ဖြည့်စွက်ထားသည်။
ကျန်တဲ့အရာအားလုံးအတွက်အရမ်းကောင်းတယ်၊ ရိုးရိုးလေးပါ၊ ငါရှာချင်တဲ့အထိရောက်နေတယ်။
ဗွီဒီယိုကဒ်ကအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့် steam XD မှာ dota2ကိုကစားနိုင်တယ်
ကျွန်ုပ်၏ nvidia ကဒ်၏ပုံစံကိုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်၎င်းကိုကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ compatible ကျေးဇူးပြု၍ compatible
[root @ localhost zznearslzz] # rpm -qa * \_ nvidia \_ * * \_ kernel ကို * \_ sort; uname -r; lsmod | grep -e nvidia -e nouveau;
79865 1 nouveau ttm
i2c_algo_bit 132572i915, သွင်ပြင်လက္ခဏာ
ဗီဒီယို 191042i915, nouveau
cat: /etc/X11/xorg.conf: ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲမရှိပါ
cat: lspci - ဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ
NVIDIA ကော်ပိုရေးရှင်း GF108M [GeForce GT 540M] (rev a1)
ယခုတွင်သူသည် support list တွင်ရှိနေလျှင်မည်သည့် commands ကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်မည်နည်း
yum သည် akmod-nvidia-173xx xorg-x11-drv-nvidia-173xx-lib ဖြစ်သည်။
yum -y ကို install akmod-nvidia-304xx xorg-x11-drv-nvidia-304xx-libs
yum -y ကို akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs ထည့်သွင်းပါ
ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်ပျောက်နေသောအရာကိုမည်သူမဆိုသိပါသလော။
၎င်းသည် Linux စနစ်အများစု၏စိတ်ပျက်အားလျော့စေသောအရာ၏အစွန်အဖျားသာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးအမျိုးအစားသည်လိုအပ်သည်။
yum တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ဘာကြောင့် Fedora ကဒီအလုပ်ကိုမလုပ်သင့်ဘူးလဲ။ အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပေးသောစနစ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ? ၎င်းကိုမလိုအပ်သင့်ပါ၊ ၎င်းသည်စနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။ ငါစနစ်ကပြီးပြည့်စုံသောဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုလုံးဝသဘောတူပေမယ့်; ရည်ညွှန်းသည့်ဥပမာကဲ့သို့ပင် yum တိုးတက်စေရန်ကုဒ်အနည်းငယ်ကိုသာထည့်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ fuck ဆိုတဲ့ကအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းမထားဘူး? !!
1st အကယ်၍ သင်သည် live cd fedora ကိုတပ်ဆင်ပါကအခြေခံကျသည်။
2º၎င်းတွင် package များမပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်လိုင်စင်ဆိုင်ရာပြissuesနာများကြောင့်သို့မဟုတ် distro ၏အတွေးအခေါ်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
3 အကယ်၍ သင်သည် developer မဟုတ်လျှင် Windows ကိုသုံးပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့မှတ်ချက်ကငါ့ကိုနားလည်စေတယ်
Noob အသုံးပြုသူ၊ ဤဘလော့ဂ်တွင်သန့်ရှင်းသော Wintendo ရှိရန်နည်းလမ်း။ သင်သည်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ချင်ပါက wintendo 888888888 ကိုဆက်လုပ်ပါ။ linux သည်အရာအားလုံးရှိသည့် noob အသုံးပြုသူများကိုမစဉ်းစားသောသူများအတွက်အရာအားလုံးရှိသော်လည်းမှားယွင်းသော်လည်းအလုပ်လုပ်သည် HAHAHA
, သတင်းအချက်အလက်ကအမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း fedora ကငါ့ကိုငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်၊ XD ကိုဘာမှမစုစည်းနိုင်ဘူး၊ ငါတို့ linux ဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်ရလိမ့်မယ် =)
Andres Benavides ဟုသူကပြောသည်
Andrés Benavides အားပြန်ကြားပါ
စိတ်မကောင်းပါ၊ ငါ fedora ကို install လုပ်ပြီးယခု update လုပ်ပြီးပရိုဂရမ်အချို့ကို install လုပ်ချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်အမှားရပါသည်။
[root @ localhost ~] # yum -y update ကို
တင်ထားသော plugins များ - langpacks, refresh-packagekit
အမှား - fedora / 20 / x86_64: repository အတွက် metalink ကိုမထုတ်ယူနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေး။ ထပ်မံကြိုးစားပါ
ArchLinux ရှိ Flattr-icons-kde
အခွင့်အလမ်း (သို့) ကူးယူနိုင်သလား။